स्वेटशर्टहरू → काम गर्ने कपडाहरू • पेशेवर P&M कम्प्यूटर कढ़ाई
स्वेर्टशर्टहरूयसको छेउमा ट्राउजर i टी-शर्टहरू, धेरै उद्योगहरूमा कर्मचारी लुगाको आधारभूत सेट हो। हाम्रोबाट उपलब्ध मोडेलहरूको विस्तृत श्रृंखला दोकान यसको उद्देश्य प्रयोग वा प्रयोगकर्ता प्राथमिकतामा निर्भरता उत्पादनको चयन सक्षम गर्दछ।
कामको लागि स्वेटशर्टहरू र हरेक दिन तपाईंको आफ्नै ग्राफिक्सको साथ
प्रस्तावित मोडेलहरू उच्च-गुणवत्तायुक्त सामग्रीबाट बनेका छन्, जसको कार्य भनेको यसको अपरेशनको लागि उच्चतम सम्भावित प्रतिरोध र कठिन मौसमको स्थिति विरूद्ध संरक्षण हो।
स्वेटशर्टहरू धेरै उद्योगहरूका प्रतिनिधिहरूको आधारभूत उपकरण हुन्, निर्माण, उत्पादन वा रसद। उनीहरूको व्यावहारिक गुणहरूको बहुमुखी प्रयोगको णी हुन्छ - हावा र चिसोको न्यानोपन प्रदान गर्नु बाहेक, उनीहरूले जाकेटको तुलनामा आवागमनको स्वतन्त्रतालाई पनि अनुमति दिन्छन्, निजी कपडा सुरक्षित गर्दा।
हामी वसन्त वा शरद अवधिको लागि विभिन्न मौसम सर्दहरू वा ट्रान्जिसन जम्परहरू अनुकूलित सबै मौसमहरूको लागि मोडलहरू प्रस्ताव गर्दछौं।
हामी तपाईंलाई प्रस्ताव गर्दछौं काम ज्याकेट मोडेलमा निर्भर बिभिन्न मुल्यहरूमा - विशेष उद्देश्यको साथ समृद्धको लागि सबैभन्दा आधारभूतबाट।
तिनीहरू प्रायः पोलिस्टरबाट बनेका हुन्छन् जसले अधिक थर्मल इन्सुलेशन प्रदान गर्दछ, र यसरी क्लासिक भन्दा आवागमनको अधिक स्वतन्त्रता काम ज्याकेट.
थप रूपमा, प्रायः मोडेलहरूमा थर्मल इन्सुलेशन र जिपरहरूको साथ व्यावहारिक जेबका लागि स्ट्यान्ड-अप कलरहरू छन्। हामी विभिन्न र colors्गहरूमा स्वेटशर्टहरू प्रस्ताव गर्दछौं, लामो र छोटो आस्तीनको साथ साथै चरित्रको साथ चेतावनी चिंतनशील तत्वहरूको साथ।
चिन्तित लुगा यो उपयुक्त सडक मजदुरहरू, निर्माण श्रमिकहरू वा अन्धकार पछि काम गर्नेहरूको लागि उपयुक्त हुनेछ।
कार्य शर्टहरू कम्पनीहरू जस्तै टाउको वा Stedman गहन प्रयोग गर्न प्रतिरोधी कपडाहरूको बनेको।
घर्षणको प्रभावमा पर्ने तत्वहरूको रक्षा गर्न, विशेष सुरक्षा तत्वहरू चयन गरिएका मोडेलहरूमा सिलाइन्थ्यो। साथै, केहि शैलीहरू भेन्ट्सको साथ समृद्ध गरिएको छ तीव्र व्यायामको समयमा पसीना कम गर्न।
प्राय: मोडेलहरूले कम्मर र कलाईमा आरामदायक स्वागत गर्दछ निजी कपडा वा फोहोरमा भएको क्षतिबाट बचाउन।
बिक्रीमा हुन्: ऊन जैकेट, कार्य ज्याकेट, पॉलीप्रोपाईलिन ज्याकेट, चेतावनी ज्याकेट, स्वेटरहरू।
अधिक प्रतिष्ठाको लागि निजीकरण
धेरै ग्राहकहरु यसको कदर गर्दछ व्यक्तित्व र निजीकरणविशेष गरी यदि कर्मचारीहरूले सम्भावित ठेकेदार र ग्राहकहरूको साथ सम्पर्कमा प्रतिनिधि कार्य गर्दछन्।
कार्य शर्टहरू छापको साथ अधिक र अधिक सामान्य छ किनकि यो विज्ञापनको सस्तो प्रकारको बराबर हो। यस कुरालाई ध्यानमा राख्दै, एक उच्च-गुणस्तरको चिह्नित विधि विचार गर्नुहोस् जुन क्षति, र color्ग घाटा र उच्च तापमान धुने प्रतिरोधात्मक छ। त्यसकारण हामी यसलाई ठोस निजीकरणको लागि सिफारिस गर्दछौं कम्प्युटर कढ़ाई.
पुरुषहरूको काम स्वेर्टशर्टहरूपुरुषको ऊन ऊन काम गर्ने स्वेटशर्टहरूऊन काम को जैकेटकाम ज्याकेटAllegro काम sweatshirtsसेतो काम को जैकेटमहिला काम स्वेर्टशर्टडेनिम काम ज्याकेटएन्जेलबर्ट स्ट्रस वर्क ज्याकेटजुला वर्क शर्टपुरुषको काम ज्याकेटइन्सुलेटेड काम ज्याकेटहरूचिंतनशील काम ज्याकेटहरूओएलएक्स वर्क शर्टऊन स्वेटशर्ट्सAllegro ऊन काम वर्केट ज्याकेटहरूकार्य शर्ट साइट: accro.plsoftshell कार्य ज्याकेटहरूखैरो काम ज्याकेटहुडको साथ काम ज्याकेटहरूप्रिन्टको साथ काम स्वेटशर्टहरूएल्लेग्रो प्रिन्टको साथ काम स्वेटशर्टहरूजाडो काम जाकेटन्यानो काम ज्याकेटजुला वर्क शर्टलुगा स्वेटशर्टहरूकाम स्वेटशर्टहरूऊन जैकेटको काम गर्नुहोस्सस्तो काम स्वेटशर्टहरूकाम लुगा स्वेर्टशर्ट
4.9 /5( 16 वोट )